Garaaca A wanaagsan aad hurdada ka kartaa, dhigi aad la dheesho ama idinku soo diro qarqaryo hoos aad dhabarta. Ma aha wax waayo-aragnimo ah ee jecel raadkaagu la gubtay iyada oo ku hadla oo tayo leh mug soo jeestay ilaa dhibic ka mid ah keenaysay digniinta gaari waa. Ama aad nafisto karaan kuwa aad jeceshahay la Gurtida nasteexo aad janno u soo diro.
Maanta, meesha ugu fiican oo ah muusigu waa Internet, laakiin waxaad weli u waayi kartaa, waxa uu u tiro mid ka mid ah sababaha. Ka sokow, goobaha in music ciidanka u yeelan karaan lambarka mid ka mid ah la dhaafi karin, inta badan abuuray in uu ilaaliyo xuquuqda dadka shirkadaha music oo aad waayo-aragnimo u dhegeysanaya sida xanibayo intii suurto gal ah.
Tusaale ahaan, Youtube ogolaan ma in aad kala soo bixi heeso iyo hadana ma haysan shaqo ah ku celiska ah anfacaya, taas oo macnaheedu yahay waxaad u baahan doontaa in keyd la gacanta ku hayso iyo bandwidth qashinka haddii aad rabto in ay dhagaystaan ​​track hal kaani oo kale mar . Oo ha ii bilowday xayeysiis. Xaaladaha noocaas ah, waxay ka caawisaa in ay leeyihiin barnaamij ka furan doonaa cruft iyo dardar music daahir ka Internet toosan galeen dhegihiinna.
Qeybta 1: Best MP4 taariikhqorihii
Part2: Qeybta 2: Sidee loo Diiwaan MP4 Isticmaalka Wondershare TunesGo?
Bal qiyaas adduunka ah ee aad ku leedahay guud ahaan gacan ku haynta waxa aad maqalka. Adduunka A meesha aad ku qori karta music ciyaaro ka hadla sida file hal oo hawshan samee, sida aad u fadlan. Sida ay goor wanaagsan.
Wondershare TunesGo waa barnaamij unobtrusive tayo sare leh u jeesta your computer galay xarun gacanta music ah, kuu oggolaadaan in aad soo qabto, gubi iyo abaabulo oo dhan music on your computer. Waxay ka kooban tahay todobo hawlaha kala soocay laba qaybood - "Get Music" iyo "Music Library". Waxaan jeclaan lahaa inaan idin ​​soo bandhigo ay sifooyinka muhiimka ah sida hoos ku qoran.
Khayraadka music badan oo ku jihaysan Baro, aad waxaa ka heli kartaa music caan ah oo badan.
Rowan screen sare waxaa buuxiyeen ilaa girgirka la music ah oo dhan qaybaha iyo niyadda, iyadoo sida diirada la heli karo si ay uga caawiyaan in aad doorato.
Duuban heeso iyo playlists
Songs iyo playlists oo dhan ayaa sidoo kale waxaa lagala soo bixi karaa internetka adigoo gujinaya icon ku hoos icon playlist ama kan ku xiga horyaalka heesta.
Qaabab dhowr ah ayaa lagu taageeraa.
Qaabka doortay file ka soo dejisan noqon kartaa MP3 ama MP4 720p video.
Download videos Direct ama music.
Koobiyo xiriir ah in ay hal video, music ama ma, oo dhajinta galay TunesGo u soo bixi doonaa inuu your computer.
Qor waxa aad rabto.
Qabsaday dhawaaqa kasta oo hadda on your computer ciyaaro, haddii ay tahay loo maqli karo, huleeshay dhawaaqa ama qof ku hadla.
Maamul music Library
Abaabulaan, share, soo dejinta iyo dhoofinta music aad soo bixi, duubay oo ku daray in ay aad maktabadda.
1) Music: riixdid "Music" sii dayn doonaa inaad soo dhoofsadaan music, waxa ay wadaagaan in ay Facebook, via e-mail ama Twitter, waxaa la dhoofiyo si ay qalab ku xiran ama ku gubi.
2) Movies: Sifeey maktabadda music aad ku xiran tahay hadii ay audio-kaliya ah ama video.
3) degsan / rikoodh Sifeey maktabadda music aad ku xiran tahay haddii ay soo bixi ama duubay.
Dib ugu xog ku saabsan Qalabka aad
Dib wax walba oo ku saabsan qalab aad u hagaagsan iyo maktabadda music aad.
Qeybta 2: Sidee loo Diiwaan MP4 Isticmaalka Wondershare TunesGo ?
Waxaan ku hanuunin doonaa in aad isticmaasho Wondershare TunesGo si ay u qoraan MP4 by tallaabooyin wax yar uun ka dib markii sida.
1. Download Wondershare TunesGo halkan oo ku xidh marka la eego talaabada degdeg ah talaabo.
2. Open TunesGo Wondershare dib markii la rakibey ka dibna riix "Record" tab ka dibna riix badhanka REC weyn.
Halkaa marka ay marayso, waa in aad xulan track music in aad rabto in aad si ay u qoraan ah. Fur xisaabtaada Spotify iyo ciyaaro wadada aad rabto si ay u qoraan. Xaaladdan oo kale, waa qaliin radio.
3. Marka song la duubay, saacad ka muuqan doona oo muujinaysa markii ugu socda.
Riix badhanka STOP in ay joojiso duubo. Si aad u hubiso song xaqa aad duubay, guji "Diiwaangashan tahay" tab.
4. Waxaad ka heli doontaa faylka diiwaan MP4 on the "diiwaangeliyey" liiska, oo waxaad riixi kartaa badhannada "Dhoofinta" inay u dhoofiyaan file MP4 si aad u qalab kale ama u wadaagaan in qalabka asalka ah.
> Resource > MP4 > taariikhqorihii MP4 - Qor kasta Video inay MP4